Indlu Esemaphandleni Enothando YaseFransi Kwifama Yamahashe - I-Airbnb
Indlu Esemaphandleni Enothando YaseFransi Kwifama Yamahashe
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguNandi & Elmarie Experience Creators
UNandi & Elmarie Experience Creators yi-Superhost
Romantic 2 sleeper cottage; ulongezo olutsha olunika umdla kwiFrench Styled Welgelee Estate. Ngedama elikhulu ekwabelwana ngalo.
Ngezibini & nabatshatayo engqondweni; yenzelwe ubumfihlo, ulonwabo kunye nobunewunewu obusondeleyo. Ikhitshi elisesitayileni, kodwa ilula; Isitovu segesi ye-Smeg, i-oveni, i-cutlery eyonakeleyo kunye nezitya, iindawo zokulungiselela ukutya ezinesisa, zivuleleka kwindawo ebanzi, enesicwangciso esivulekileyo sokuphumla kunye nendawo yokutyela.
Izitulo ezixhonywe ngobuhle kunye neeseti zibekwe phambi kwendawo yomlilo enesisa. Iisilingi eziphezulu ezinemiqadi yeplanga eveziweyo & nomgangatho omhlophe wescreed offset ifanitshala yakudala kunye nemizobo yeoyile endala.
I-daybed yeVictorian kwigumbi lokuphumla ingasetyenziswa ngumntwana. Igumbi lokuhlambela likhulu kwaye liyamkeleka kakhulu kwaye liqhayisa ukuhamba kwishawa kunye ne-double-basin vanity kunye nesipili esikhulu kunye nokukhanya okulungileyo. Ibhafu ye-Victorian kwiqonga eliphakanyisiweyo lijonge ngaphandle kwegadi engasese.
Igumbi lokulala lahlulwe kwindawo yokuphumla ephambili kunye nendawo yokutyela ngekhuselo elijingayo elinesisa elinokuthi lishiywe livuliwe okanye livalwe ukwenzela ukusondelana okukhulu. Igumbi lokulala linebhedi enkulu yesileyi kunye neengcango eziphindwe kabini zaseFransi ezivulekele kwigadi efihlakeleyo eneshawari yangaphandle. Ecaleni kwekhitshi kukho ipatio egqunyiweyo yangaphandle enebhentshi enesisa ehonjisiweyo ehamba eludongeni olunye, ilungele ukuphumla emva kwemini enelanga. Kukwakho netafile yokutyela ngaphandle.
Okungakumbi malunga neFrench Styled Welgelee kunye neZitali
IWelgelee ngumhlaba wokugqibela oseleyo kwifama enkulu yobisi. Lo mhlaba ungaphezu kweehektare ezi-6 kwaye urenta i-greenbelt eselumelwaneni yokutyisa idlelo. I-greenbelt ibonelela ngeendlela ezintle zokuhamba ecaleni komlambo ojikelezwe yi-fynbos yemveli kwaye ikhuselekile kwaye ikwinqanaba lentsomi kuyo yonke iminyaka. Le estate ngokwayo ibandakanya iMain House, izindlu zeendwendwe zeeholide ezi-2 (I-Romantic French Cottage kunye ne-2 bedroom Stable Cottage) kunye neSilos enkulu eguquliweyo (iSilos eWelgelee) elala abantu abasi-8. Nceda ujonge imifanekiso yethu yasemoyeni ukuze ufumane umbono wobungakanani kunye nomhlaba.
Ukufikelela kwichibi elikhulu lamanzi anetyuwa (12mx5m) - ekwabelwana ngalo. Kwaye ibekwe kude ukuba ayizukuchaphazela.
Uqhagamshelwano lwefayibha ye-10MB
Udonga olukhulu oluxhonywe kwiscreen esisicaba se-smart TV
Inkonzo egcweleyo ngoMvulo, ngoLwesithathu nangoLwesihlanu ngokuvaswa nokuayinwa ngexabiso le-R150 ngomthwalo ngamnye.
Inkqubo yeAlarm yomjikelezo
Izibonelelo zeBraai ziyafumaneka xa uzicelile
Izinja ezincinci zamkelekile ixesha elide njengesiqinisekiso esisayiniweyo kuwo nawuphi na umonakalo kwifenitshala kunye nentlawulo yesilwanyana sasekhaya. Nceda ucele ngaphambi kokuba ubhukishe.
Izibonelelo zomntwana: ibhedi kunye nesitulo esiphezulu
Iziguquli zokucinywa komthwalo.
Umbuki zindwendwe ngu- Nandi & Elmarie Experience Creators
Izimvo eziyi-1 222
Elmarie & Nandi Horak.
Nandi is based in Greenpoint Cape Town. We started the business…
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nommkeli wakho, ohlala kwi-Estate, kodwa unemfihlo epheleleyo apha.